Pyae Phyo (MMiTD): May 2016
All Xiaomi Device များအတွက် အလွယ်ဆုံး Gapps installer ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Google installer English V2.0 Apk
Xiaomi Device များအတွက် အလွယ်ဆုံး Gapps installer ပြုလုပ်နိုင်မယ့်
Application လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Version update နဲ့ထွက်ရှိလာပြီး English စာနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်မှု့ရှိသူများ Download ရယူလိုက်ပါ။
The Googe Installer V2 that works smoothly on Kitkat,
Lolipop and Marshmallow ROMs for Installing the minimum
Google Apps Base. You can later on directly download the required
Gapps from Google Play Store.The installed version of play store
might not be latest so you have to update it later.
ဒီ Software လေးကတော့ မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ လုပ်ဆောင်သမျှ အားလုံးကို
Tutorials, Demo Videos, Save Play Movies, Music and Games စသည်တို့ကို Capture
Screen နဲ့ Record လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် Record ပြုလုပ်ထားတဲ့ Videos
ဖိုင်တွေကိုလည်း Editor များစွာနှင့် အလွယ်ဆုံး စိတ်တိုင်းကျ တည်းဖြတ်နိုင်ပြီ
အထူးကောင်းမွန်တဲ့ Capture Software ကောင်းလေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပြီသား Videos တွေကို အနီး အဝေး မြင်ကွင်းတွေနှင့် အလွယ်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Keygen ( Crack )ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
>> Download From Here <<
အမျိုးအစား: Video Recorder
ဖုန်းထဲ့မှာဆော့ဝဲများ Auto ဒေါင်းလော့ဆွဲခြင်း၊ အင်တာနက်အော်တိုပွင့်ခြင်း၊ Virus များကို လွယ်ကူစွာရှင်းလင်းနိုင်မယ့် Stubborn Trojan Killer v1.0 Apk
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများ အတွက် ဖုန်းထဲ့မှာဆော့ဝဲများ Auto ဒေါင်းလော့ဆွဲခြင်း၊ အင်တာနက်အော်တိုပွင့်ခြင်း၊ Virus များကို လွယ်ကူစွာရှင်းလင်းနိုင်မယ့် Stubborn Trojan Killer v1.0 Apk လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒီဆော့ဝဲက တကယ်ပဲ virusတွေကိုရှင်းလင်းပေးနိုင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ လူသုံးအများဆုံး
virius killer ဆော့ဝဲလေးပါဖြစ်ပါတယ်
ဤဆော့ဝဲကို အသုံးပြုရန်အတွက်ဖုန်းတွင် Root ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်
အမျိုးအစား: Android Antivirus
♪ Digital Life Journal Issue Vol-5 ၊ Issue5(30.5.16) ♫
Digital Life ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Digital Life Journal Vol(5), Issue (5) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ 30-May ရက်နေ့ထွက်ပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှသူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
♪ 5,000mAh ဘက်ထရီပါဝင်သော Acer Liquid Zest Plus စမတ်ဖုန်းကို ဇူလိုင်လတွင် ရောင်းချမည် ♫
Liquid Zest Plus တွင် quad-core 1.3GHz Cortex-A53 CPU နှင့် Mali-T720 GPU တို့ပါဝင်သော MediaTek ၏ MT6735 chipset ကို အသုံးပြုထားသည်။ ၅.၅ လက်မ HD display ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး 2GB RAM နှင့် 16GB သိုလှောင်မှုပမာဏ ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ သိုလှောင်မှုပမာဏကို microSD card မှတစ်ဆင့် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဘက်ထရီက 5,000mAh ဖြစ်သည်။
♪ Zenfone 3, Zenfone3Deluxe နှင့် Ultra တို့ကို Asus မိတ်ဆက် ♫
လူအများ မျှော်လင့်ထားသည့် အတိုင်းပင် ထိုင်ဝမ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော Computex ပြပွဲ၌ Asus က Zenfone 3, Zenfone3Ultra နှင့် Zenfone3Deluxe တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
ယခုနှစ်တွင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် မော်ဒယ်များတွင် သတ္တုဘောင်များဖြင့် ဒီဇိုင်းအဆင့်မြှင့်ထားပြီး အရှေ့ဘက်နှင့် ကျောဘက်တွင် Corning Gorilla Glass3ကို အသုံးပြုထားသည်။ ထို့အပြင် လက်ဗွေဖတ်စနစ်များ ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Qualcomm Snapdragoon ပရိုဆက်ဆာများကို အသုံးပြုထားသည်။
မော်ဒယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
- 5.5 inch, 1920 x 1080 pixel Super IPS+ LCD display
- Qualcomm Snapdragon 625 processor
- Up to 4GB of RAM
- 16MP rear camera with Sony IMX298 sensor
- Up to Cat6LTE
- USB 2.0 Type-C connector
- Gold, blue, black, or white color options
- 5.7 inch, 1920 x 1080 pixel Super AMOLED display
- Up to 6GB of RAM
- Up to 256GB of storage
- 23MP rear camera with Sony IMX318 sensor
- Up to Cat 13 LTE
- 3,000 mAH battery with Qualcomm Quick Charge 3.0
- USB 3.0 Type-C connector
- Gold, silver, and grey color options
- 6.8 inch, 1920 x 1080 pixel IPS LCD display
- Qualcomm Snapdragon 652 processor
- 4,600 mAH battery with Quick Charge 3.0
- Gray, silver, and pink color options
မော်ဒယ်တစ်ခုချင်းစီတွင် 8MP ကျောဘက်ကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းအတွက် optical image stabilization နှင့် electronic image stabilization တို့ပါဝင်သည်။ ကျောဘက်ကင်မရာ၏ အောက်တွင် လက်ဗွေဖတ်စနစ်တစ်ခု ပါဝင်ပြီး dual SIM card slot (slot တစ်ခုကို microSD card reader အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်) များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Zenfone3Ultra သည် 7.1 channel DTS အသံပတ်လည်စနစ်ထောက်ပံ့ထားသည့် နားကြပ်ပေါက်နှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားချောမွေ့သည့် ဗီဒီယိုအတွက် Asus Tru2Life+ software အသုံးပြုနိုင်မည့် ဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ်ဖြစ်သည့် 4K TV-grade ပရိုဆက်ဆာ ပါဝင်သော ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်ကြောင်း Asus မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
♪ “မီဒီယာသမားများအတွက် Google အား ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်စေမည့် နည်းလမ်းများ” ♫
Google ရဲ့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ Vice President ဖြစ်တဲ့ Mr. Mike Nelson က မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့စဉ်တုန်းက သူ့ခရီးစဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မီဒီယာသမားများအား ဖိတ်ကြားပြီး MICT Park ပင်မဆောင်မှာ 'Google for Media' တစ်ခုကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ယင်း workshop သို့ စာရေးသူ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာမီဒီယာလောကမှ အယ်ဒီတာများ၊ သတင်းထောက်များ၊ ဗီဒီယို ဂျာနယ်လစ်များ၊ စာရေးဆရာများ၊ မီဒီယာလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များစွာ တက်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယင်း workshop မှာ Google မှတာဝန်ရှိသူများဖြစ်တဲ့ Amy Kunrojpanya, Head of Communications & Public Affairs, Indonesia & Greater Mekong နှင့် DivonLan, Product Manager, Google တို့က မီဒီယာသမားများအတွက် google ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ မီဒီယာသမားများအတွက်သာမက သတင်းအချက်အလက် များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ရှာဖွေလိုသူများအတွက်လည်း အသုံးတည့် လှပါ တယ်။ဒီ Workshop လေးဟာ မီဒီယာသမားများအတွက် အလွန်တရာ အဖိုးတန်လှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အချက်အလက်များ ရှာဖွေတဲ့ အခါ google ဆိုတဲ့ Search Engine ကိုအဓိကထားအသုံးပြုနေရပါတယ်။
သို့သော်လည်း သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိတိကျကျ အသုံးမချနိုင် သေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ သိချင် တဲ့စာလုံးကို Google Search Box မှာပဲရိုက်ထည့်ကာရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုရိုက်ထည့်ရှာဖွေလိုက်တဲ့ အခါထွက်ပေါ်လာ မယ့် result တွေက ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင် ချင်မှ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင် မီဒီယာသမားများအဖို့ အကိုးအကားပြုဖို့ အချိန်ကာလအလိုက် စာရင်းဇယားများ၊ သရုပ်ပြပုံများ၊ ဒေသအလိုက် ဘယ် အကြောင်းအရာတွေကလူတွေစိတ်ဝင်စားနေသလဲ၊ ဘယ်အချိန်တွေမှာ လူတွေက ဘယ်အကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားမှု အမြင့် တက်ဆုံးလဲ၊ မိမိတို့ ရေးသားမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာအကိုးအကား ပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုရှာမလဲ စသဖြင့် များစွာသောသတင်းအချက်အလက်တွေကို ရယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ယခုပြုလုပ်သော Workshop ဟာ media professionals များအတွက် Google experts များက သူတို့ရဲ့ newsroom ထဲမှာ Google tools တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲ၊ သတင်းလိုက်ရာ field တွေထဲမှာ သူတို့ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကနေ ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲစတာတွေကို သိရှိနိုင်စေဖို့ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာပါ။ တကယ်တော့ စာရေးသူအနေဖြင့် Google က မီဒီယာအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ Media Tools တွေ ရှိတယ် ဆိုတာကို မသိခဲ့ပါဘူး။ ယခုလိုဖိတ်ကြားမှပဲသိရတာပါ။ ယင်း Media Tools များကို အောက်ပါ Link မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Workshop မှာတော့ ပထမဆုံး Google မှာထိရောက်စွာရှာဖွေနိုင်မယ့် Search Tips များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒါတွေထဲက စိတ်ဝင်စား စရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ တကယ်တော့ Google မှာရှာဖွေ နိုင်မယ့် နည်းလမ်း များစွာရှိလို့ အဲဒါကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြဖို့အတွက်က မလွယ်ပါဘူး။ အင်တာနက်မှာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေကာ လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို မသိရှိပါက define ဆိုတဲ့ keyword ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့။ သင်က Scrabble ကစား နေတဲ့အခါ 'panacea' ဆိုတဲ့စာလုံးကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ကစား တဲ့သူက အဲဒီစာလုံးက မရှိပါဘူးလို့ ငြင်းခုန်တဲ့အခါ define panacea လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ရင် ယင်းစာလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
စကားစုတွေအလိုက် အတိအကျ အစီအစဉ်အလိုက်ကို ရှာဖွေလိုရင်တော့ အဖွင့်အပိတ် quotation mark တွေထဲမှာ စကားစုတွေကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုအမိန့်လိုမျိုး စကားစုတွေအတွက်ပေါ့။ အဲဒီလို quotation mark တွေအတွင်း မှာ မရေးသားဘဲ ရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တော့ ယင်းစကားစုထဲမှာပါဝင်တဲ့ စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီအလိုက် ရှာဖွေသွားမှာမို့ မိမိတကယ် လိုချင်တဲ့ ရှာဖွေမှုကို ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စကားစုကို ဘယ်လို အဆုံးသတ် ရမှန်းမသိရင်တော့ * ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ onadark desert* ။ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေမှုထဲမှာ မပါဝင်စေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို “ – “ (minus) သင်္ကေတကိုအသုံးပြုပြီး ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ မလေးရှားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်လို့ ရိုက်ထည့် ရှာဖွေတဲ့အခါ MH370 လေယာဉ်ပျက်ကျမှုသတင်းတွေ တက်လာ ကြတာ ကြုံဖူးမှာပါ။ တကယ်ကိုယ်ရှာဖွေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ အဲဒါတွေ မပါစေချင်ဘူးဆိုရင် minus သင်္ကေတသုံးပြီး ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ . Malaysia –MH370 –flight –jetဒီသင်္ကေတကို နောက်တစ်မျိုး သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အစားအသောက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲဒီအစား အစာထဲမှာ မပါဝင်ချင်တဲ့ အရာကိုလည်း minus နဲ့ ဖယ်ရှား နိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ salsa recipe –tomato ။ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက တစ်ခုတည်းသော website အတွင်းမှာပါဝင်တာ တွေကို ပဲ ရှာစေချင်ရင် site: ကိုသုံးရပါမယ်။ ဥပမာ receipes site:theguardian.com, site:nasa.gov "mars rover"။ ဖိုင်အမျိုးအစား လိုက်ရှာဖွေလိုပါက filetype နဲ့ ရှာရပါမယ်။ ဥပမာ internet users myanmar filetype:pdf။အထက်ပါ အတိုင်းဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ Search လုပ်မည့် နည်းလမ်းများအားလုံးကို
google မှာ ပုံများကို ရှာဖွေကြပါတယ်။ images.google.com မှာရှာဖွေ ကြရမှာ မိမိတို့လိုအပ်သော ပုံများကို စာရိုက် ထည့်ရှာဖွေနိုင်သကဲ့သို့ ဓာတ်ပုံကိုထည့်သွင်းပြီးလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ Google search box ဘေးမှာပါဝင်တဲ့ ကင်မရာ ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး မိမိတို့ရှာဖွေလိုတဲ့ပုံကို upload တင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ပုံရှိတဲ့ link ကို ထည့်သွင်း၍သော်လည်းကောင်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။Diagram ပုံများကို ရှာဖွေလိုပါက diagram ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ anatomy diagram ရိုက်ထည့် ရှာဖွေလိုက်ရင် diagram ပုံများနှင့်တကွ ဖော်ပြထားသော လူ့ခန္ဓာဗေဒပုံ များစွာ ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။Google ကပုံများကို ရှာဖွေရာမှာ ပုံမှာ ပါဝင်တဲ့ meta data အချက်အလက်များအပေါ်အဓိကထားတွက်ချက်ကာ ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Image Search လုပ်ရာမှာ Search Tools များကို သုံးစွဲပြီး မိမိတို့ရှာဖွေလိုတဲ့ ပုံရဲ့အသေးစိတ်အချက် အလက်များကိုပေးကာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ပုံအရွယ်အစားအလိုက်၊ ကာလာအလိုက်၊ အမျိုးအစား အလိုက်၊ အချိန်အလိုက် ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ပုံများကို အွန်လိုင်း ပေါ်တင်ရာမှာ Google က မှန်မှန်ကန်ကန်ရှာဖွေနိုင်စေဖို့ meaningful ဖြစ်သော နာမည်ပေးကာ တင်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၁၂၃ စသဖြင့် နာမည်များပေးကာ တင်ထားတဲ့အခါ Google က နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ Pyinmana နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံများကိုတင်ပါက Pyinmana ဆိုတဲ့ အမည်ပေးကာတင်မှ ပုံရှာသူများ Pyinmana ကို ရိုက်ထည့်ရင် ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံတွေကို အချိန်ကာလအလိုက်ရှာလို့ရတဲ့အတွက် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အခြေ အနေတွေမှာ ပုံတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အွန်လိုင်းမှာ လူ တစ်ယောက်က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပုံကို တင်ပြီး ယခုဖြစ်နေသလိုလိုရေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Google trends ကတော့ စာရေးသူတွေအနေနဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ရေးတဲ့အခါ လူတွေက ဘာတွေစိတ်ဝင်စားနေလဲ၊ ဘာတွေစဉ်းစားနေလဲ၊ ဘာတွေက hot ဖြစ်နေလဲ၊ ဘာတွေက popular ဖြစ်နေလဲ စသော trend တွေကိုသိရှိဖို့ trend မှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ တည်နေရာအလိုက်၊ အချိန်ကာလ အတိုင်း အတာ အလိုက် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ လတ်တလော iPhone6က ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေသလဲ စတာတွေကို နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲ နိုင်ငံအလိုက်ရှာဖွေရာမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်အကြောင်း အရာကို ဘယ်အချိန်တွေမှာ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်နေ သလဲဆိုတာကို သိနိုင်မှာပါ။ ဥပမာ-ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ ၂၀၀၈ တုန်း က နာဂစ် စာလုံးကို ရှာဖွေမှုမြင့်တက်နေ မယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူအနေဖြင့် Cyclone ဆိုတဲ့ စာလုံးကို Brazil, Japan, UK နဲ့ Philippines နိုင်ငံလေးနိုင်ငံကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ရှာဖွေမှု trend ကို ရှာဖွေကြည့်ရာ မတူညီသော အရောင်မျဉ်းလိုင်းများဖြင့် ဖော်ပြ ထားသည့် Line Graph တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ အစိမ်းရောင်က ဖိလစ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြာရောင်က Brazil ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံများရဲ့ အညွှန်းက အချိန်တစ်ခုမှာ Spike အမြင့်ဆုံးတက်တက်သွားပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာသေချာတာက သူတို့ Cyclone ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါ တယ်။ ထို့ပြင် အချိန်ကာလအလိုက် ဘယ်အချိန်တွေမှာ Cyclone လာလေ့ ရှိသလဲဆိုတာ ကို ဒီ Spike တက်သွားတာတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီး သုံးသပ် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
<Google Public Data>
“ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်အကိုင်တွေက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လစာ အမြင့်ဆုံးပါလဲ?”
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုမျိုးကျောင်းတွေပို့သင့် ပါသလဲ?”
“လူဦးရေနဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ နှုန်းထားပြောင်းလဲလာခြင်းက ကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပြောင်းလဲသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါသလဲ?”ကမ္ဘာတစ်လွှား မှာရှိတဲ့ data အချက်အလက်တွေကို google က စနစ်တကျစုစည်းပေးထားပါတယ်။ ယင်းအချက် အလက်များကို နားလည်မှု လွယ်ကူစေရန် Google Public Data မှာ စာရင်းဇယားများ၊ သရုပ်ဖော်ပုံများနဲ့ Visualize လုပ်ပေးထားပါ တယ်။ စာရင်းဇယား charts များနဲ့ မြေပုံများက အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲ နေမှုတွေကို animation များဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အတွက် လွယ်လင့်တကူ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေ၊ ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ policy makers တွေနဲ့ အခြားသူများက ဒီ tools တွေကိုသုံးပြီး public data တွေကို visualize လုပ်နိုင်ကာ ယင်းတို့ကို link ပေးပြီး ရည်ညွှန်းနိုင်သလို၊ ကိုယ့်ရဲ့ webpages တွေထဲမှာလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ webpages တွေထဲမှာ charts တွေနဲ့ links တွေကို embedded လုပ်ထားတဲ့အခါ နောက်ဆုံးရနိုင်သော၊ နောက်ဆုံးဖြစ်နေသော အချက်အလက်များက အလိုအလျောက် update ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Public Data Explorer ကိုတော့ Google က ၂၀၁၀ မတ်လပိုင်းက စတင် launch လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ရနိုင်တဲ့ data အချက်အလက်တွေကို World Bank Group, eurostat, OECD, International Monetary Fund ,US Department of Commerce စတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေက ထောက်ပံ့ ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း၊ နိုင်ငံများအလိုက် လူ့သက်တမ်း၊ ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်ပွားမှုနှုန်း စသဖြင့် အချက်အလက်များအား နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည် My Datasets ကိုနှိပ်ပြီး Google account နဲ့ sign in ၀င်ကာ DSPL နဲ့ရေးသားထားတဲ့ data အချက်အလက်တွေကို csv ဖိုင်နဲ့ Upload လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ DSPL ကတော့ Dataset Publishing Language ပဲဖြစ်ပြီး data visualization လုပ်ဖို့ XML –based metadata format တွေကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google က ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တရားဝင် data အချက်အလက်တွေကိုပဲ လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ အနေနဲ့ဆိုရင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကနေ မိမိတို့ကောက်ယူထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဒီမှာတင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများက မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုးကားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် unemployment rate in UK နဲ့ unemployement rate in Myanmar ဆိုတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းထားကို နှိုင်းယှဉ် ရှာဖွေကြည့်တော့ UK မှာက dataprovider အဖွဲ့အစည်းတွေ ကနေ data တွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားတာရှိပေမယ့် မြန်မာပြည် အတွက် ကတော့ မရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်အနေနဲ့ မှန်ကန် တိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေကနေ Google နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အကြောင်းအရာပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အချက် အလက်တွေကို အမြဲတင်ပေးနေသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများအတွက် အကိုးအကားပြုဖို့နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်း များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Public data များကို Google မှ ရယူနိုင်တာကို သိရှိပြီးဖြစ်တာမို့ မိမိတို့အနေဖြင့် ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Public data များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှာဖွေမှုအများဆုံး keywords များကိုရှာဖွေကာ လေ့လာနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Google Media Tools တွေက အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော link များမှာ ဆက်လက် လေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာသမားများအတွက် နောက်ထပ် အသုံးတည့်မည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။ အဲဒါ ကတော့ Journalist Toolbox ဆိုတဲ့ site ဖြစ်ပြီး www.journalisttoolbox.org မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့ လိုအပ်သော သတင်းအရင်းအမြစ်များ၊ အချက်အလက် စာရင်းဇယားများ၊ မီဒီယာဖိုင်များစသဖြင့် အကိုးအကား ပြုနိုင်မယ့် သတင်းအချက် အလက်များကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။ သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ သုံးသပ်ချက်များ ရေးသားရာမှာ ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်စေဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
♪ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြုတ်၊ တပ်နိုင်တဲ့ LG G Flex3လာမည် ♫
LG က G Flex3ကိုစက်တင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့် IFA ပွဲမှာမိတ်ဆက်မယ်လို့ သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကွေး LG G Flex3ဟာယခင်နှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ G Flex2ရဲမျိုးဆက်သစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ G Flex3မှာ G Flex2မှာလို ခြစ်ရာများကိုအလိုလိုကုစားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် အပြင် G5 လိုအစိတ်အပိုင်းများကို ဖြုတ်၊ တပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်လည်းပါလာမှာပါ။
ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းများအရ G Flex3မှာ ၅.၅ လက်မ QHD Curved Display , Qualcomm Snapdragon 820 CPU , 4GB RAM , 32 or 64GB Storage များတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ microSD Card Slot လည်းပါပါတယ်။
16MP Rear Camera, 8MP Front Camera ၂ လုံးတပ်ဆင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းများကနည်းပါးပါသေးတယ်။
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger v73.0.0.12.70 APK နောက်ဆုံးထွက်
♪ Play Store မှာဒေါင်းလို့မရတဲ့ CoC အပါအ၀င် ဂိမ်းတွေ၊app တွေကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်မလဲ ♫
အရင်တုန်းက ဒီလိုပုံစံဆင်တူ Aritcle တစ်ပုဒ်ကို Digital Times မှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ယခင်နည်းလမ်းလောက်လဲ မခက်ခဲပဲ အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ အရင်ဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ Article လိုမျိုး Third Party App မလိုအပ်လို့ တစ်ခါဒေါင်းဖို့အတွက် Play Store ကနေ Clear Data ရှင်းပြီးမှ VPN ကျော်ပြီးဒေါင်း၊ အဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်မရှုပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဒီနည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ကြည့်ရင်း စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်..။
အရင်ဆုံးသင့်အနေနဲ့ လိုအပ်တာကတော့ Application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ App နာမည်က Aptoide လို့ခေါ်ပြီး Play Store လိုမျိုး Store App တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Play Store မှာရှိတဲ့ Apps အကုန်လုံးဒီမှာရှိနိုင်တယ်လို့တော့ အတိအကျမပြောနိုင်ပေမယ့် လူသုံးများထင်ရှားတဲ့ Apps တွေ အတော်များများတော့ အသုံးရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Play Store မှာ ဒီApp ကိုရှာကြည့်တာ မတွေ့ရလို့ Search ကနေရှာပြီးဝင်ဒေါင်းလိုက်ရပါတယ်။
ဒါဆိုရင်အထက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ Install Now ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင်အောက်ဖက်မှာ Aptoide TV နဲ့ Aptoide Lite ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ Lite ကတော့ နာမည်အတိုင်း Lite Version ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုသုံးကြည့်တာလည်း တော်တော်အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ Aptoide နဂိုဗားရှင်းကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးလို့ရင်တော့ App ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် App ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Welcome လုပ်တဲ့ စာမျက်နှာတွေကို ကျော်သွားပြီးရင်တော့ ရသွားပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ App အထဲက Interface မှာ ဒီအတိုင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။
Home ကတော့ App ရဲ့ Home Page ဖြစ်ပြီး ရေပန်းစားတဲ့ App တွေ၊ Game တွေကို ပြသထားမှာပါ။ Community နဲ့ Stories ကတော့ သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး။ ပြီးရင် Update လာမှာဖြစ်ပြီး သင့်ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Apps တွေကို Update လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Social Timeline ဖြစ်ပြီး Facebook အကောင့်နဲ့ Log In လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် အပြင် Home ရဲ့ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်က Hamburger Menu ထဲက Sign Up of Login ကိုနှိပ်ပြီး Gmail နဲ့လည်း Subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံး Downloads ထဲမှာတော့ ကိုယ် Update နဲ့ Download လုပ်ထားတဲ့ Software တွေ ဂိမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးထားမှာပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ Apps ရဲ့ Interface ကိုနားလည်လောက်ပါပြီ။ ကဲကျွန်တော်တို့တွေ စမ်းကြည့်ရအောင်။ ဒါကြောင့် Play Store မှာ ရှာလို့/ဒေါင်းလို့ မရတဲ့ Clash of Clans ကို အပေါ်ညာဘက်ထောင့်က Search မှာရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအတိုင်းတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ Install ကိုနှိပ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှ အခက်အခဲမရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် Play Store မှာ ရှာလို့မရတဲ့ Marvel ဂိမ်း Future Fight ကိုရှာကြည့်လိုက်တော့လည်းတွေ့တာကိုိ တွေ့ရပါတယ်။
ကဲ ဒီအဆင့်တွေကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ သင်ဒေါင်းလိုတဲ့ Apps တွေ၊ ဂိမ်းတွေကို အလွယ်တကူ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
♪ RAM 4GB နဲ့ 16-Megapixel ကင်မရာပါဝင်တဲ့ Samsung Galaxy C5 ဖုန်း ထွက်ရှိ ♫
Samsung ဟာ ပထမဆုံး Galaxy C စီးရီးဖုန်းဖြစ်တဲ့ Galaxy C5 စမတ်ဖုန်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့က တရုတ်နိုင်ငံမှာ စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။
Galaxy C5 ဖုန်းဟာ ဖုန်းတွင်း storage 32 GB နဲ့ 64 GB ဆိုပြီး မော်ဒယ်နှစ်မျိုးထွက်ရှိလာတာဖြစ်ကာ၊ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်၊ ၃ သိန်း ၉ သောင်းခန့်နဲ့ ၄ သိန်း ၃ သောင်းခန့်ရှိပါတယ်။ C5 ဖုန်းကိုယ်ထည်ကို သတ္တုနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး၊ Home ခလုတ်မှာ လက်ဗွေရာဆန်ဆာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ တခြား Samsung ဖုန်းတွေနဲ့ သိပ်ကွာခြားမှုမရှိပါဘူး။
၅.၂ လက်မအရွယ် full-HD (1080×1920 pixels) Super Amoled မျက်နှာပြင် နဲ့ဖြစ်ပြီး၊ SIM နှစ်ကတ်ထိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် hyprid dual-SIM ဖြစ်တာကြောင့်၊ SIM နှစ်ကတ် ဒါမှမဟုတ် SIM တစ်ကတ်နဲ့ microSD ကတ်တစ်ကတ် ထိုးသုံးနိုင်မှာပါ။
Android 6.0.1 Marshmallow နဲ့ လည်ပတ်ထားပြီး၊ octa-core Qualcomm Snapdragon 617 ၊ RAM 4GB တို့ ပါရှိကာ၊ ဖုန်းတွင်း storage ကတော့ 32 GB နဲ့ 64 GB ဆိုပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
C5 ဖုန်းရဲ့ အထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့ 16-megapixel ကျောကင်မရာ ပါဝင်လာတာဖြစ်ပြီး၊ Samsung ဖုန်းတွေထုံးစံအတိုင်း ကင်မရာက ဖုန်းအပြင်ဘက်ကို ဖောင်းထွက်နေတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရှေ့ကင်မရာ ကတော့ 8-megapixel ဖြစ်ပါတယ်။
SIM တစ်ကတ်ပဲ 4G သုံးနိုင်ကာ၊ တခြားချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းတွေအနေနဲ့ NFC ၊ Wi-Fi ၊ Bluetooth ၊ GPS တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းဘက်ထရီက 2600mAh ဖြစ်ပြီး၊ 4G ကွန်ရက်မှာ မသုံးဘဲထားမယ်ဆိုရင် ၂၃၇ နာရီအထိ ထားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Samsung Galaxy C5 ဖုန်းကို လက်ရှိမှာ pre-order မှာယူလို့ရနေပြီဖြစ်ကာ၊ ဂျွန်လ ပထမအပတ်ထဲ စတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၁၀)တန်း အင်္ဂလိပ်စာ (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) အတွက် Unit (1) to Unit (14) အထိ PDF ဖိုင်များစုစည်းမှု By CHAN LAY (MCMM)
(၁၀)တန်း အင်္ဂလိပ်စာ (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) အတွက် Unit (1) to Unit (14) အထိ PDF ဖိုင်များစုစည်းမှုDownload လုပ်လို့ရအောင်လို့ ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များအတွက် Self-study ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူရာမှာသော်လည်းကောင်း ၊
ဆရာ / ဆရာမများအတွက်Teaching Aids သင်ထောက်ကူအဖြစ်သော်လည်းကောင်း အသုံးတည့်ဖို့အတွက်
အားနည်းချက်ကတော့ ...Powerpoint file တွေလို Animation တွေ နဲ့
Slide Transition တွေ မပါတော့ ရုပ်သေအဖြစ်နဲ့ ကြည့်ရှုရသလိုဖြစ်နေမှာပါပဲ.....
အားသာချက် အနေနဲ့ ... Phone နဲ့ဖြစ်စေ ၊ Computer နဲ့ဖြစ်စေ ကြည့်ရှုဖတ်မှတ်ရုံ နဲ့ အလွယ်တကူ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်အောင် ဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်....
ဒါ့အပြင် Myanmar Fonts အတွက် Fonts Error တက်တဲ့ကိစ္စကို ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး....
ဘာသာပြန် အနည်းငယ်ချော်တောငေါ့သွားတာတွေကနေ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကအထိ ပြန်စိစစ်ပေးထားပြီး အထိ တတ်နိုင်သမျှ
အမှားအယွင်းနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်...
တစ်ချို့ ဆရာ/ ဆရာမ များအနေနဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် Print ထုတ် ပြီးဖြန့်ဝေပါရစေဆိုပြီး ခွင့်တောင်းလာတာလေးတွေ ရှိပါတယ်....
တစ်ချို့ ကျတော့ မကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ ဖယ်ပြီး နည်းနည်း ပြန်ပြင် သုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်...
တစ်ချို့က ပိုကောင်းအောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Idea ထပ်လောင်းပြီး upgrade လုပ်တာတွေရှိပါတယ်..
ကျွန်တော် အနေနဲ့ အစကတည်းက ပညာဒါနအတွက်သာ ရည်ရွယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာမို့ခွင့်ပြု ( ပြု ) ပါတယ်လို့
ဒီစာမျက်နှာ ဒီ Post ကနေ ပြန်ကြားအပ်ပါတယ်..
အခုမှ Page ကို ၀င်ရောက်ကြည့်မိတဲ့သူတွေ အတွက် Unit တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ
သိရအောင်လို့ နမူနာပုံစံ Photo Image တစ်ခုစီ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး Download ရယူလိုပါက ........
အောက်ကပေးထားတဲ့ Unit တစ်ခုချင်းစီ link တွေကို သွားပြီး Download ရယူနိုင်ပါပြီ...
(တစ်စုတစ်စည်းထဲ ဆောင်ရွက်ပေးထားတာမို့ Only me နဲ့ Share ပြီး သိမ်းထားသင့်ပါတယ် )
Unit (1) The Calendar
Unit (2) Too Much Knowledge Maketh Fool
Unit (3) The Moon:aNice Place to Visit
Unit (4) Clocks through Time
Unit (5) Self-service and the Supermarket
Unit (6) Robots
Unit (7) Dreams Do Come True
Unit (8) Advertisements the Pros and Cons
Unit (9) Sleep and Dreams
Unit (10) Looking Good
Unit (11) Mosquito : Getting to Know the Enemy
Unit (12) Travel in Southeast Asia (1)
Unit (13) Travel in Southeast Asia (2)
Unit (14) Helen Keller
Credit To... (HERE)
မှတ်ပုံတင်အတု လုပ်ချင်သူများ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ :D
မင်မိုရီစတစ်တွေကအသုံးဝင်နေဦးမှာပါ။မင်မိုရီစတစ် ဈေးနှုန်းကလည်းUSB 2.0 ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်16 GB သိုလှောင်အားရှိတဲ့စတစ်ရဲ့ဈေးဟာ ခုနှစ်ထောင်သာသာပဲရှိလို့သုံးပျော်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာတွေကမင်မိုရီစတစ်ကိုလုံးဝလက်ခံပေမယ့် တက်ဘလက်နဲ့စမတ်ဖုန်းတွေမှာကOTG (On The Go) စနစ်ကိုအထောက်အကူပြုမှသာမင်မိုရီစတစ်ကိုOTG Adapter ကနေ ထိုးစွပ်သုံးနိုင်ပါမယ်။OTG ပါရင်အခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့Direct OTG မင်မိုရီစတစ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထိုးစွပ်ပြီးလည်းသုံးနိုင်ပါမယ်။
မင်မိုရီစတစ် ကိုOTG စနစ်နဲ့စမတ်ဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေမှာသုံးနိုင်တာ တော့ဟုတ်ပါရဲ့။မတော်တဆမင်မိုရီစတစ်ပျောက်သွား မယ်၊အဲဒီထဲမှာလည်းအရေးကြီးdataဖိုင်တွေပါသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။USB အပေါက် မှာထိုးစွပ်လိုက်လို့အထဲကဖိုင်တွေအလွယ်တကူ မြင်နေရရင်သူများ အလွယ် တကူကူးယူသွားလို့ရတာပေါ့။မင်မိုရီစတစ်ပျောက်မှမဟုတ်ဘူး။မဆိုင်သူက ခဏတဖြုတ်ဖွင့်ကြည့်ပြီးသူလိုချင်တာကူးသွားရင်လည်းခံရနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်အရေးကြီးဖိုင်တွေကိုမင်မိုရီစတစ်ထဲမှာအအုပ်အဆိုင်းမရှိမထားဘဲpassword ခံပြီးအကွယ်အကာpartition တစ်ခုအောက်မှာသုံးကြပါမယ်။
မင်မိုရီစတစ်ထဲကဖိုင်တွေလုံအောင်ကာတဲ့နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ပထမနည်းလမ်းကစတစ်ထဲထည့်ပြီး သုံးလို့ရတဲ့Software တစ်ခုခုရဲ့အကူအညီကို ယူတာပါ။အဲဒီSoftware တွေမှာအခပေးနဲ့အခမဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အခမဲ့မှာကသုံးနိုင်တဲ့dataပမာဏအကန့်အသတ်ရှိတတ်ပြီးများသောအား ဖြင့်2.4 GBအထိပဲ ပေးပါတယ်။
ဒုတိယနည်းလမ်းကဖိုင်လုံခြုံရေးSoftware ကိုမင်မိုရီစတစ်ထဲမှာ အသင့် ထည့်ရောင်းပေးတဲ့မင်မိုရီစတစ်မျိုးပါ။သူကမင်မိုရီစတစ်ရဲ့Storage area အားလုံးနီးပါးကိုလုံခြုံရေးဧရိယာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာSandisk နဲ့Maxell အမျိုးအစားတွေဟာဒီလိုမင်မိုရီစတစ် အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။မင်မိုရီစတစ်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သုံးနိုင်မှာကThird party software ဖြစ်ပါတယ်။မင်မိုရီစတစ်ထဲကဖိုင် တွေကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့software အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် အကောင်း ဆုံး encryption ပေးနိုင်တဲ့အထဲမှာVeraCrypt ပါပါတယ်။ သူက မင်မိုရီစတစ် အတွက်သာမကဘဲhard drive တွေအတွက်ပါလုံခြုံမှု ရယူ ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်system drive တွေကိုVeraCrypt နဲ့လုံခြုံရေး ယူပေးနိုင်ပါတယ်။မင်မိုရီစတစ်ထဲမှာထည့်ပြီးportable version အနေနဲ့ သုံးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သွားလေရာပါတဲ့private vault တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
VeraCryptကိုကြားဖူးချင်မှကြားဖူးမှာဖြစ်ပေမယ့်အရင်ကနာမည်ကြီး TrueCrypt ကိုတော့ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။Open Source application အနေနဲ့အရမ်းကိုလူကြိုက်များခဲ့ပြီး၂၀၁၄ခုနှစ်လောက်အထိ တောက်လျှောက် Version တွေ မြှင့်သုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။၂၀၁၄ နောက်ပိုင်း မှာTrueCrypt ရပ်ဆိုင်းသွားပြီးVeraCrypt အနေနဲ့အဆင့်မြှင့်တင် လာခဲ့ပါ တယ်။TrueCrypt အဟောင်းကိုဆက်သုံးချင်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ယိုပေါက်တွေကိုsoftware ရေးသူတွေက ပြင်ဆင်မပေး တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်TrueCrypt နဲ့ပတ်သက်ရင်dataအတွက် အန္တရာယ် တချို့ရှိနိုင်ပါတယ်။VeraCryptမှာအဲဒီလိုအန္တရာယ်မျိုးမရှိတော့လို့ စိတ်ချ လက်ချသုံးနိုင်ပါတယ်။Dataလုံခြုံမှုကိုပထမဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်နေတာကြောင့်စွမ်းရည်လည်း ကောင်းပါတယ်။ True Crypt တုန်းကရှိခဲ့တဲ့အားနည်းချက်တွေကို ပြုပြင်ပေးပြီးထားပါပြီ။ ဒါ့အပြင်VeraCrypt မှာအဆင့်တိုးတက်မြှင့်တင်မှုတွေလည်း လုပ်ပေးထား ပါတယ်။Software ကိုwww.veracrypt.codeplex.com ကနေdownload ချပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။Windows XP ကနေWindows 10 အထိသုံးနိုင်တဲ့ အပြင်Mac ရဲ့OSX မှာလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။download ချပြီး ရင်Portable private vault အဖြစ်သုံးမယ့်မင်မိုရီစတစ်ကို ကွန်ပျူတာမှာ ထိုးစွပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်စတစ်ထဲကိုVeraCrypt ဖိုင်ကိုကူးထည့်ပါ။မင်မိုရီစတစ်ပေါ်ကနေ software ကိုrun ပါ။software ပွင့်လာပြီဆိုရင်Create Volume button ကိုနှိပ်ပါ။VeraCrypt Volume Creation Wizard က ရွေးချယ်စရာOption အတော်များများကို ပေးပါမယ်။အဲဒီအထဲကနေEncryptanon-system partition / drive ကိုရွေးပါ။ပြီးရင်next ကိုနှိပ်ပါ။Standard VeraCrypt Volume တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သလို ဖျောက်ထားတဲ့Volume တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါမယ်။ ဖျောက်ထားတဲ့volume ထဲမှာကိုယ့်ဖိုင်တွေထည့်ပြီး သိမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုစပ်စုမစပ်စုတို့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်လုံခြုံမှုပိုပြီးအဆင့်မြင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်Standard Volume သည်ပင်လျှင်ပုံမှန်ကိစ္စအတော် များများ အတွက်လုံခြုံမှုအားကောင်းနေပါပြီ။ကိုယ်ဖန်တီးချင်တဲ့Volume တစ်ခုကို ရွေးပြီးရင်Next ကိုနှိပ်ပါ။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကိုယ်ဖန်တီး ချင်တဲ့ Volume ကိုဘယ် နေရာမှာထားမယ်ဆိုတာVeraCrypt ကိုပြောဖို့ ဖြစ်ပါ တယ်။Select Device button မှာကလစ်နှိပ်ပါ။Window အသစ်တစ်ခု ပွင့်လာတဲ့အခါExplorer Window ထဲမှာကိုယ့်မင်မိုရီစတစ်ပါမပါစစ်ပါ။drive ကို ရွေးတာမဟုတ်ဘဲdrive ထဲကpartition ရွေးထားတာဖြစ်ကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။ပြီးရင်OK နှိပ်ပါ။Volume Location အောက်မှာdrive ကို ပေါင်းထည့်ပေးပါမယ်။Next ကိုနှိပ်ပါ။Create encrypted volume and format it ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုsoftware ကပေးပါမယ်။ဒါကိုမရွေးချင်ရင် Encrypt partition in place ကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။ဘာpartition မှမရှိသေးတဲ့ မင်မိုရီစတစ်သုံးမယ်ဆိုရင်Create encrypted volume ကို ရွေးရမှာဖြစ်ပြီး အရင်ကဖန်တီးထားတဲ့volume ထဲမှာdata တွေထည့်ချင်တာဆိုရင်Encrypt partition ကို ရွေးရပါမယ်။
NTFS စနစ်နဲ့Format ချထားတဲ့drive တွေမှာပဲencrypt in place option ကိုသုံးနိုင်ပါမယ်။Data တွေထည့်ပြီးရင်ကိုယ်သုံးချင်တဲ့encryption စနစ်ကို ရွေးပေးရပါမယ်။Encryption algorithm ရှစ်မျိုးရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီးdefault သုံးတဲ့AES က ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်ပါတယ်။Encryption စနစ် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီးရင်Test လုပ်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ပြီးရင်ရမည့် Benchmark ကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါမယ်။ကိုယ်ရွေးတဲ့Encryption အကြောင်း အသေအချာမသိဘူးဆိုရင်အဲဒီခလုတ်တွေကိုမနှိပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့password ကိုပုံပြောင်းပြီး ဖော်ပြပေးမဲ့Hash Algorithm ကိုလည်း ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်default အတိုင်းထားတာက ကောင်းပါတယ်။
ပြီးရင်ကိုယ်သတ်မှတ်မယ့်volume size ကိုရွေးပြီးNext ကိုနှိပ်ပါမယ်။ Password နှစ်ခါဖြည့်ပါမယ်။Password မှာစာလုံး၊ဂဏန်း၊သင်္ကေတ စုံအောင် ထည့်သင့်ပါတယ်။Display password ရွေးရင်Password ကို မြင်နေရပါမယ်။ပြီးရင်4GBထက်ပိုကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကိုသိမ်းမလားဆိုတာ မေးပါမယ်။ကိုယ်ရွေးတဲ့ဖိုင် အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးFile system ကို Veracrypt ကရွေးပေးပါမယ်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာfile system နဲ့Cluster size ကိုပြပေးပါမယ်။Quick format the drive ကိုလည်း ရွေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးသွားရင်Application Window ပေါ်မှာmouse pointer ကိုနှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက် ရွှေ့ပေးနေရပါမယ်။Random encryption key ကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာFormat ကိုကလစ်နှိပ်ပါမယ်။ သူက ဖိုင်တွေသိမ်းမယ့်Volume ကိုဖန်တီးပေးပါမယ်။ဒါကအချိန်တစ်ခုယူပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ ပြပေးထားပါမယ်။ဖိုင်တွေစထည့်ဖို့ ဒါမှ မဟုတ်volume ထဲကဖိုင်တွေကြည့်ဖို့Wizard ထဲကထွက်ပါ။Select device မှာကလစ်နှိပ်ပါ။ကိုယ်ရွေးမယ့်drive ကိုပြပေးပါ။ပြီးရင်Mouse ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။Password ထည့်ပေးပါ။Drive list ထဲမှာကိုယ်ရွေးတဲ့volume ပေါ်လာ ပြီဆိုရင်သူ့ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးWindow Explorer ထဲမှာကြည့်နိုင်ပါပြီ။
အမျိုးအစား: Knowledge , Security , နည်းလမ်းများ
Android မှာ ကြည်လင်သော အသံလေးနဲ့ Recorder လုပ်ပေးမယ်-Call Recorder - ACR v17.5 (Premium) APK
Android ဖုန်း နှင့်Tablet ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် အသံဖိုင်းများစွာ Record လုပ်ပေးမယ် apk လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်း call အ၀င်ရော ၊ အထွက်ရော အသံကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ record လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Record လုပ်ချင်းတယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် အောက်ကလင့်ခ် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။Android version 2.2 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းအားလုံးမှာ ဒီဆော့ဝဲလေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်းလေး၏ ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့ 6.03 ရှိပါတယ်။